“Waa in aan horyaalka ku noqonaa sida Champions League oo kale” – Toni Kroos – Gool FM
Frank Lampard oo qiray in Chelsea ay u baahan tahay inay qaado talaabadan si ay…
“Waa in aan horyaalka ku noqonaa sida Champions League oo kale” – Toni Kroos
Dajiye November 28, 2018
(Real Madrid) 28 Nof 2018. Khadka dhexe Kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa xaqiijiyay in Los Blancos ay muhiim tahay in ay ugu ciyaarto horyaalka La Liga ee dalka Spain xamaasad la mid ah sida tartanka Champions League oo kale.
Hadalka khadka dhexe xulka qaranka Germany ee Toni Kroos ayaa wuxuu imaanayaa kadib guushii ay xalay kaga gaareen kooxda Roma kulankooda 5-aad heerka group-yada ee tartanka Champions League.
Toni Kroos ayaa wuxuu tilmaamay in cid kasta ee ku sugan kooxda Real Madrid ay si aad ah u xiiseeneyso inay si joogta ah u guuleystaan kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain, sida tartanka Champions League oo kale.
“Waxay u muuqataa in si xamaasadeysan aan ugu ciyaareeno kulamada Champions League, laakiin ma ahan inay sidaas dhacdo, sababtoo ah dhamaantayada waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano horyaalka La Liga”.
“Waxaan rajeenayaa inaan ku ciyaaro isla qaab ciyaareedka kulankii Roma dhamaan kulamada kala duwan, laakiin mararka qaar ma sameyn karno taas”.
“Si kastaba waxaan ku faraxsanahay guushaas iyo qaab ciyaareedkii aan sameenay, waxaana dooneynaa inaan ku soo celino isla qaab ciyaareedkan kulanka Sabtida ee Valencia”.
Real Madrid Maxay AAMINSANAAYEEN markii ay iska iibinayeen Cristiano Ronaldo??
Maxaa dhacay tan iyo inta uu Gool la'aanta yahay Lukaku!!??...(Waxaa la dhalay 92-milyan oo Caruur ah, Waxaa is Casilay ilaa....Waxaa sidoo kale.....)